DARYEELKA BEERTA YUCCA (FILAMENTOUS): BEERISTA, DHALIDA, DIYAARINTA WARSHAD JIILAALKA, CUDURADA IYO CAYAYAANKA - SOOSAARKA DALAGGA
Yucca wuxuu yimid Ruushka laga bilaabo dhulalka New World - Tani waa, in ka badan oo dhan, Maraykanka iyo Mexico.
Gaar ahaan, Yucca Nitchataya waxay ka timaaddaa qaybta bari ee Waqooyiga Ameerika, hadda waxaa lagu beeray dhulalka Crimean iyo Caucasus.
Dheeraad ah ee maqaalka waxaan ka hadli doonaa yuqua beerta: daryeelka iyo transplanting, dhalmo, cuduro, sharaxaad of ubax, sawiro.
Yucca filamentous waa la kori karaa iyo sida ubax gudaha ah, iyo sida geed beerta. Waa geed dabool ah oo aan ku dhowaad lahayn stem.
Caleemaha cagaaran-cagaaran ee foomka lanceolate waxay leeyihiin talooyin ku qoran. Waxay ka duwan tahay qaraabadeeda taajirkeeda midabka: caleemaha waxaa lagu qurxin karaa jilicsan ama jaale ah.
Yucca filamentous: sawirka noocyadaas.
Daryeelka guriga iyo goobta
Next, waxaan ka hadli doonaa sida loo daryeelo ubaxa beerta yaaqa, nooca ubaxa dhirta waa, haddii aad u baahan tahay inaad qodo jiilaalka, daboolo yuqua iyo in ka badan.
Shaqada ugu muhiimsan isla markiiba ka dib iibka waa inaad dooranayso meesha saxda ah ee "cusub". Waa inay noqotaa meel fiican oo iftiin leh iyada oo aan jirin wax qorshe ah, isbeddel heerkulka, qoyaan xad dhaaf ah ama qalalan - yuaka ma jecla xagasha.
Xaaladda degitaanka dhulka banaan, waa inaad doorataa meel wanaagsan oo iftiin leh, maxaa yeelay yuqua wuu jecel yahay qorraxda. Xitaa ka sii fiican, haddii meeshani ku yaallaan jeexan - ma u oggolaan doonto biyaha inay istaagaan, iyo xididdadu ma qudhmi doonaan. Si kastaba ha noqotee, waa faa'iido in la sameeyo lakabka dheecaanka ee godadka dhulka.
Yucca qosol leh ayaa jecel nuurka, sidaas darteed way jeceshahay koonfurta, daaqado iftiin leh. Xilliga diiran, qolka "geedo timir ah" ayaa laga qaadi karaa balakoonka ama beerta qorraxda dhalaalaya.
Waxaad ku dhejin kartaa penumbra, ilaa iyo inta aanay ahayn meel mugdi ah iyo qoyan. Haddii dhirta aan laga saari karin, waxaa lagama maarmaan ah in la hubiyo in si joogta ah loo qabsado qolka guga diiran iyo xagaaga. Si kastaba ha ahaatee, iska ilaali qoraalada.
Room Filament Yucca wuxuu jecel yahay heerkulka dhexdhexaadka ah. Xilliga kuleylka waa heerkul ilaa 25 darajo, xilliyada qaboobaha - aan ka yarayn +8. Taasna, beerta jiifka, qurxinta dachas, waxay u adkaystaan ​​xitaa qaboobaha qaboobaha. Si kastaba ha ahaatee, xilliga qaboobaha waxaa lagama maarmaan u ah hoy.
Si hawo qoyaan Janno Janno hoos u dhacsababtoo ah waxay u caado noqotay jawi qalalan.
Sidaa darteed, buufinta ma aha baahi degdeg ah, laakiin ma noqon doonto mid aad u adag: waxay ka caawin doontaa in la nadiifiyo caleemaha boodhka.
Waxa ugu muhiimsansidaa daraadeed biyuhu ma gashan karaan meesha.
Sidoo kale buufinta lagama qaadi karo qorraxda tooska ah - waxay ku hanjabtaa inay gubto caleemo.
Baahida biyaha dhexdhexaad ah, qoyan ciidda sida ugu dhakhsaha badan lakabka ugu sareeya ayaa soo baxaya. Waa muhiim in aanad ka badneyn: Ycca waxaa ku jiri doona la'aanta qoyaan badan oo ka sahlan qarashka badan. Guga, xagaaga iyo dayrta, waraabin badan ayaa la oggol yahay, laakiin xilliga jiilaalka waa in la yareeyaa.
Yucca, oo taagan qol diirran, waxay u baahan tahay qoyaan ka badan kan ku nool qolka qabow. Sidoo kale waxay khuseysaa xajmiga dhirta: geed weyn oo timir ah ayaa uumi baxaya qoyaan badan, sidaa darteedna wuxuu u baahan yahay waraabin badan oo badan, iyo waliba sida caadiga ah.
Waxa kale oo aad u baahan tahay inaad hubiso in marka biyaha lagu waraabiyo aanay ku dhicin cirridka.
Dufanka cad ee la isku qurxiyo ubaxyo Yaclinka daboolan waxaa lagu uruuriyaa peduncle ballaaran, kaas oo lagu soo rogo rosette caleen ah ilaa heer mitir ah. Panicle noocan oo kale ah waxaa ka mid ah ilaa 200 ubax.
Ku calaamadee waxay noqon karaan 2-3 usbuuc bilaha xagaaga - bilaha Juun ama Luulyo - oo kaliya ka dib laba sano ka dib markaad degto. Yucca ma barbar dhaco haddii ay wax yar ku qaboojiso jiilaalka.
Sida dharka ugu sareeya Yucca waxay ku haboon tahay dhismaha cawska oo la kariyay, Bacriminta dabiiciga ah oo ku salaysan lo'da ama digada faras.
Cunto geedka waxaa lagu talinayaa guga iyo xagaaga saddexdii toddobaadba mar.
Waxaad bacrimin kartaa guriga "palm" xilliga qaboobaha, iyo sidoo kale isla markiiba ka dib markii lagu bedelay iyo xididid, inta lagu jiro xanuunkeeda.
Jardinka jiifka waxaa fiican in aan lagu quudiyo Bacriminta nitrogen - kiiskan, iska caabinta u dhaxaysa dhaxan xilliga qaboobaha ayaa si weyn loo yareeyey.
Goorma iyo sida loo beeray beerta beerta? Yucca, sida dhirta kale, ma jecla isbedelka isdaba joogta ah.
Waa in aad la socodsiiso nidaamkan oo keliya marka dheriga qolka "palm" uu noqdo mid aad u yaryar oo xididdada horeyba uga soo baxa godadka. Ama haddii yuqua waa in laga samata-baxaa biyaha laga qodo, ciidda dufanka leh.
Haddii aad rabto in yuqua aad ku sii korodho, dooro dheri cusub oo wax walba ah dhowr inji oo ka badan intii hore. Haddii koritaanka dhirta u baahan yahay in la joojiyo, 1/4 ee xididada waa in la gooyaa oo lagu beeray dhar hore oo buuxsamay carrada cusub.
Haddii yuuka uu aad u weyn yahay, dib uma soo celin kartid, laakiin kaliya badh aad santimitir oo carrada ah ku beddesho carrada cusub. Tani waa in la sameeyaa mar sanadkii.
Qeybta hoose ee dheriga waa inuu lahaadaa lakabka dheecaankaA: laga bilaabo 1 ilaa 5 cm iyada oo ku xiran baaxadda haanta.
Ka dibna fiidiyoow ku saabsan sida loo abuuro yuqua beerta.
Sidee beerta ycca taranta? Kobcinta yuqua yoolka ka soo abuur ama abuur dufan ahaan.
Habka koowaad waxaa lagama maarmaan ah in lagu rusheeyo abuurka biyo diirran maalintiiba, ka dibna si siman u qaybiyaan kartidooda kuna rusheeyaan iyaga oo leh peat light ama earth sheet. Awoodda leh abuurka waxay u baahan tahay in lagu daboolo filim, ka dibna ku rid meel diiran, meelo diiran oo marmarna hawo qaadasho. Under shuruudaha wanaagsan, geedo waa in la arko in bil ah.
Habka labaad waxay soo jeedinaysaa aasaasida dushooda "palm". Gooyada waa in la qalajiyaa, gooyaa caleemaha hoose, oo soo ururi dhamaan kuwa ku haray bartamaha jirkooda. Jidhka waxaa lagu beeray ciid qoyan, daboolay polyetylene iyo ku rid meel diiran, marmar ku duubaya "koriyo". Ka dib markii 3-4 toddobaad, marka jarida ayaa xidid ku dhacay, waxaa lagu beeray meel joogto ah.
Sidoo kale ku habboon biqilka iyo jajabka maskaxda. Waa in lagu dhajiyaa ciid qoyan, si adag u cadaadi leh, iyo daboolay polyetylen. Marka sprouts cusub ka soo baxaan burooyinkeeda on asliga ah, waa in loo qaybiyaa si kasta oo qayb ka mid ah waxaa jira dhalidda leh xididdada. Waxay ku fadhiisan karaan meelo joogto ah oo aad u tagaan nidaamka caadiga ah ee daryeelka.
Yucca soo saarista beerta waa suurto gal kala qaybinta baadiyaha. Marka la eego in dhirta ay si dhakhso ah u koraan, habkani waa dhalashada waa mid aad wax ku ool ah oo fudud. Intaa waxaa dheer, ma oggolaan doonto in lagu qurxiyo "geedo timir ah" si ay u koraan mid aad u weyn.
Beerta jinka jinka
Sidee ayuu dhirta iskood uga gudbi karaa? Sida loo daboolo yucca filamentous? Xilliga jiilaalka, yuqua sii kordhaya berrinka bannaan ee beerta, waxay u baahan yihiin inay daboolaan. Caleemooyinkeeda waxaa lagu uruuriyaa bartamaha baadiyaha, si taxadar leh loogu duubay weelka iyo qaybta keentay waa la daboolay. Waxaa muhiim ah in la sameeyo si aysan barigu uusan u leexin iyo geedka ma lumiso qaabkeeda. Sida ugu dhakhsaha badan roobabka ayaa hoos u dhacaya, hoyga ayaa la daboolay barafka. Ka saar difaac marka khatarta ah ee khatarta ah.
Doorasho kale - Ku dabool geedaha leh sanduuq alwaax ah oo qallafsan oo la dabooli karo walax aan la taaban karin, caag foorno ah ama alaabo saqaf ah leh bilawga qabowga daran. On top of this hoyga, waxaad ku rusheyn kartaa caleemo qalalan, dabooli caws ama gran laamaha, iyo lakabka kama dambaysta noqon doonaa filim ah.
Video ku saabsan sida loo daryeelo beerta Yucca ka hor xilliga qaboobaha.
Miraha iyo codsigooda
Yucca waxay midho dhali kartaa kaliya ee dhulkooda hooyo, sababtoo ah waxaa kaliya laga helaa balastiin, kaas oo qabanaya pollination. Noocyada qaar ee yuqua, midhaha waa berrito, kuwa kale - sanduuq leh abuur. In yuqua filin waa sanduuq wareeg ah dhexroor ilaa 5 cm.
Yuqa badan oo qoyan ayaa halis ku ah muuqaalka asalka ah ee xididka ama stem rot, cudurada bakteeriyada ama fungal. Caleemaha iyo jirridda waxaa lagu daboolay jilicsan meelaha meelaha la taabto iyo dhibco madow.
Xaaladdan oo kale, qaybaha waxyeellada geedka waa in laga saaraa, qaybaha badbaadada waa in lagu daaweeyaa fungicide. Dabcan, waraabinta waa in la yareeyaa, buufinta waa inay joojiyaan wadajir.
Laakiin xaqiiqda, si loo daaweeyo cudurkan waa mid aan suurtagal ahayn: waxaa ka wanaagsan in la xidho qayb ka mid ah badbaadista, qayb caafimaad qabta jir ama dusha sare ee geedka.
Haddii caleemaha hoose ee qallalan ay ku qallalaan yuqua, tani waa geedi socod dabiici ah, waana inaadan ka welwelin. Si kastaba ha noqotee, haddii caleemaha sare ay sidoo kale qalalaan, wax ayaa khaldan. Inta badan, sababta keentay la'aanta qoyaan - saxdaa habka waraabka.
Yucca waxaa laga yaabaa in lagu weeraro meelo qalalan. caarada caarada: Markaas caleemaha, sidoo kale, bilaabaan in ay qalalaan, daboolay dhibco huruud ah iyo qotwebs.
Si loola dagaallamo cayayaanka, yuqua waa in lagu daaweeyaa xal fudud oo tubaako ah, chamomile Dalmatian, toon ama saliid. Ku dhaq warshadda waa inay ka soo baxdaa miiska si cidhifyada caleemaha. Si loo fuliyo nidaamka waa lagama maarmaan si loo dhamaystiro guusha cayayaanka.
Iyadoo aphids shield, sidoo kale khatar u ah yuqua, waxaad u baahan tahay inaad si kale u dagaalanto. Halkan ayaa kaa caawin doonta xalinta saabuun, oo u baahan in la tirtiro caleemaha. Dirxiga waxaa lagu buufin karaa xalka saabuun iyo tubaako, kaas oo kerosene ama xitaa aalkolada lagu daro. Waxaa suurtogal ah in la isticmaalo wakiilada ka hortagga cayayaan-ka-soo-kabashada.
Haddii ay noqoto huruud
Inta badan dhacdadan waxaa lagu arkay xilliga qaboobaha, marka qolalku ay aad u kulul yihiin qalabka kulaylka, iyo iftiinka, lid ku ah, maaha mid ku filan. Xaaladdan, iskuday ka saar geedka ka fog beteriyada oo ku siiyaan helitaanka xaddiga ugu badan ee iftiinka.
Sidoo kale, sababta muuqaalka muuqaalka ah ee qulqulka waxaa laga yaabaa inuu noqon karo waraabin ku filan, sameynta ama isbeddel deg-deg ah oo heerkul ah. Ama lagu buufiyo qorraxda: kiiskan, lakabka huruuda ah waa qorraxda qoraxda.
Yucca waa warshad wax ku ool ah. Caleemaheeda ayaa loo isticmaalaa si ay u sameeyaan fiilooyin adag iyo inay sameeyaan dambiilo. Marka la eego, xididdada yadu waxay bixiyaan dheeh casaan. Qaybaha kala duwan ee warshadda waxay tagaan wax soo saarka daawooyinka kala duwan.
Laakiin marka laga reebo kuwa wanaagsan, calaacal been ah waa qurxinta quruxda badan ma aha oo kaliya qolka gudaha, laakiin sidoo kale shakhsi ahaan shakhsi ahaaneed.